Rabshado Xoogan oo ka dhacay Xaafada Soomaalida ka dagan tahay Magaalada Stockholm (Daawo Sawirada) | Salaan Media
Rabshado Xoogan oo ka dhacay Xaafada Soomaalida ka dagan tahay Magaalada Stockholm (Daawo Sawirada)
Dhoorkii Habeen ee lasoo dhaafay waxaa rabshado xoogan kasocdeen xaafado kamid ah Caasimada Dalka Sweden ee Stockholm gaar ahaan Xaafadaha ee ku badan yihiin dadka ajaaniibta ah ee kunool Dalkaasi.
Dhalinyaro careesan ayaa xaafada Husby waxa ee ku gubeen gawaari badan iyo goobo ganacsi iyadoona Rabshadaha ee noqdeen kuwa habeebna habeenka ka dambeeya sii xoogeesta kuna faafa xaafado kale oo dhoor ah.
Dadkan Rabshadaha wada ayaa la sheegay in ee ka careesan yihiin Shaqo la’aan halka Warar kalana sheegayana in ee ka caroodeen in Oday ah ay dileen Ciidamada Booliiska ee Magaalada Stockholm.
Rabshadihii ugu dambeeyay ayaa habeenkii xalay ahaa waxa ee ka dhaceen xaafada Rinkeby oo ah xaafad ee ku badan yihiin Soomaalida waxaana halkaasi lagu gubay gawaari dhoor ah , Soomaalida ayaana la sheegay in saameyn xalay ku yeelatay rabshadahaasi.
Soomaalida kunool Xaafadaha ee rabshadaha kasocdaan ayaana ahaa kuwa habeenadan aan banaanka usoo bixin guryahooda dhaxda ka xirtay iyagoo ka cabsi qaba in ee saameyn ku yeelato rabshadaha kasocda Halkaasi.